Team News | Ilay tokana
Manatsara ny fahaizan'ny orinasa sy ny haavon'ny ekipa iraisam-pirenena, manitatra ny hevitra momba ny asa, manatsara ny fomba fiasa ary manamafy ny fahaiza-miasa, ary koa manamafy orina ny fananganana kolontsaina, hampivoatra ny serasera ao anatin'ny ekipa sy ny fiaraha-miasa, ny Tale Jeneraly — Ammy no nitarika ny varotra iraisam-pirenena ekipa mpandraharaha, izay saika olona 20 eo ho eo no mandehandeha any Beijing, izay nanateranay hetsika fananganana ekipa manokana.
Nisy endrika isan-karazany ny hetsika fananganana ekipa, anisan'izany ny fifaninanana an-tendrombohitra, ny fifaninanana amoron-dranomasina ary ny fety bonfire. Nandritra ny dingan'ny fiakarana, nifaninana sy nifanentana izahay, mampiseho ny toe-tsaina mampiray.
Taorian'ny fifaninanana dia nivory mba hisotro sy hankafy ny sakafo eo an-toerana ny rehetra; ny afon-dehilahy kosa no nandoro ny hafanam-pon'ny olona rehetra teo an-tampony. Nanao lalao isan-karazany izahay, nampitombo ny fahatsapana eo amin'ny mpiara-miasa, hanatsara ny fahatakaran'ny tsirairay sy firaisan-tsaina.
Tamin'ny alàlan'ity hetsika fananganana tarika ity dia nanamafy ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny departemanta sy ny mpiara-miasa izahay; manamafy ny fitambaran'ny orinasa; manatsara ny fahombiazan'ny asa sy ny hafanam-pon'ny mpiasa. Mandritra izany fotoana izany, afaka mandamina ny asan'ny orinasa amin'ny tapany faharoa amin'ny taona isika, mandehandeha hamita ilay asa famaranana farany.
Amin'ny fiaraha-monina ankehitriny, tsy misy olona afaka mijanona irery irery. Fifaninanana orinasa dia tsy fifaninanana manokana, fa fifaninanana ekipa. Noho izany, mila manatsara ny fahaiza-mitarika isika, mampihatra ny fitantanana maha-olona, ​​manolo-tena ny olona hanao izay tsara indrindra, manatanteraka ny andraikiny, manatsara ny fiaraha-mientan'ny ekipa, hahatratra ny fizarana fahendrena, fizarana ny loharanon-karena, mba hahatrarana ny fiaraha-miasa mandresy ary amin'ny farany dia hahavita asa ambony kalitao milamina sy mahomby, amin'izany dia mampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny orinasa.